သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် လူ ၄ ဦး သေဆုံး ၊ ၄၂,၀၀၀ ကျော် ရေဘေးသင့် - Xinhua News Agency
ကိုလံဘို ၊ မေ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ကြီးမားသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီး မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၄ ဦး သေဆုံးကာ ၄၂,၀၀၀ ကျော်မှာ ဘေးသင့်ခဲ့ကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာ(DMC)၏ မေ ၁၅ ရက်တွင် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သော ရာသီဥတုအခြေအနေ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။အဆိုပါသေဆုံးမှုများသည် ဆိုးရွားသော ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း DMC ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
လူနေအိမ် အလုံး ၂၀၀ ကျော်မှာ အလုံးစုံ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဘေးဒဏ်သင့် အိမ်ထောင်စု ၄၂ စုမှ လူဦးရေ ၁၇၅ ဦးကို ယာယီရွက်ဖျဉ်တဲများတွင် နေရာချထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ Gampaha မြို့၌ ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ပေါ်နေသော လမ်းပေါ်တွင် သွားလာနေသော အမျိုးသားများအား မေ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ မြို့တော် ကိုလံဘို နှင့် တောင်ပိုင်း အပါအဝင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ခရိုင်များစွာအတွက် မြေပြိုခြင်း သတိပေးချက်တစ်ခုကို အမျိုးသားဆောက်လုပ်ရေးသုတေသနအဖွဲ့(NBRO)ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘေးအန္တရာယ်အမြင့်မားဆုံး ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် နေရာများတွင် နေထိုင်သောပြည်သူများအား ဘေးကင်းသည့် မြေပြန့်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကြရန် NBRO က မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ Gampaha မြို့၌ ရေများ ဝင်ရောက်နေသည့် လူနေအဆောက်အအုံတစ်လုံးအား မေ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံစစ်တပ်က ရေကြီးရေလျှံမှုဒဏ်ခံစားရသည့် ပြည်နယ်အများအပြားသို့ ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များ စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် ပိတ်မိနေသော ပြည်သူများအား ကယ်ဆယ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာမှ တာဝန်ရှိသူများကို အဆိုးရွားဆုံး ထိခိုက်ခံစားရသည့် ခရိုင်များတွင် နေရာချထားပြီး ဆိုးရွားသောရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူများကို ထားရှိရန် အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရာသီဥတု အစီရင်ခံချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အားကောင်းသော ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ယခုအခါ အိန္ဒိယ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်သို့ ဦးတည်နေကြောင်း နှင့် မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးခြင်း နှင့် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်စေနိုင်သည့် အလားအလာရှိကြောင်း သိရသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ မိုးလေဝသဌာန နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်သော ရာသီဥတုအခြေနေများတွင် လာမည့်ရက်များတွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ မိုးပိုမိုရွာသွန်းနိုင်ခြေရှိပြီး လူတိုင်း သတိပြုကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ (Xinhua)
COLOMBO, May 15 (Xinhua) — At least four people had died and over 42,000 others had been affected by days of strong winds and heavy rains which lashed the country due to the formation ofasuper cyclone in the Bay of Bengal, Sri Lanka’s Disaster Management Center (DMC) said in its latest weather report Saturday.
Sri Lanka’s Meteorology Department, in its latest weather update, said that more rains were expected over the country in the coming days and urged everyone to be cautious. Enditem